Ny tontolon' IkalaFanja: août 2014
Tonga sahady ny volana Septambra, mifarana hatreo ny fialan-tsasatra ho an'ny ankizy mpianatra fa tsy latsa-danja ihany koa ireo Ray aman-dReny nanararaotra naka fialan-tsasatra niaraka tamin'ireo zanany. Izaho manokana aloha efa niverina niasa. Koa dia mba afaka manome hevitra kely ho anareo, mba hampisy ny haingam-panahinareo amin'ny akanjo ho entina miasa.
Ny ambonin'akanjo dia novidiana tao amin'ny Maje. Ny poketra tao amin'ny Primark ary ny zipo tao amin'ny Princess Nomade
Ny kiraro Aldo
Ny kojakoja tao amin'ny IAM (ilay loko hoho : Yves Saint Laurent)
Tsy dia atao lava reny be aloha ny resaka anio fa aleo ireo sary ireo no hiteny sy hisolo tena ahy eo anilanareo anio.
Dia mirary soa ho amin'ny manaraka indray!
Publié par Ikala Fanja à 11:13 2 commentaires:
Publié par Ikala Fanja à 14:15 4 commentaires:
Publié par Ikala Fanja à 13:23 2 commentaires:
Mangatsiaka, manorana aty aminay amin'ity herinandro ity! Mahavalabalaka ny saina ny tsy mahita masoandro koa dia manita-kevitra manao izay mahavery dia ny tenako.
Ny tsotra indrindra dia ny manao sakafo, sady mahafinaritra ny mikarakara no mahafinaritra ny mihinana azy avy eo. Koa ho zaraiko aminareo ary ny masaka tato.
Mofo baolina no be dia be ato ry zareo a! Isika Malagasy dia samy manana ny fomba fanaovany azy, ary samy manana ny tsiro itiavany azy. Ny ahy ilay nahazatra ahy hatramin'ny fahazaza, ilay nataon'i Neny no tena ankafiziko; somary mitovy tsiro amin'ireny amidy eny anaty sobika eny an-tsena ireny izy ito ka asa na ho tianao fa izaho aloha tena mankafy mafy.
Aleo tsy manao be safary ary isika fa tonga dia alefa ny tanisa.
Ireto ary ny zavatra ilaina:
lavanila 1 (tahony)
lalovaitra 2 sotrokely
ronono 36 sotro
menaka 1litatra (hanendasana azy)
Rehefa vonona ianao, dia andao hikarakara izato mofo
Maka lovia lehibe jobo isika, arotsaka ny lafarinina, ny siramamy, vakiana ny atody, alefa ihany koa ny ronono, ny lavanila izay nokikisana mba ahazoana ny voany ao anatiny ary ny lalovaitra. Rehefa izay, dia afangaro miaraka ireo zavatra ilaina rehetra ireo mandra-pahazo paty iray mibolongana.
Avela hilona ora iray.
Maka vilany Saba (ao Madagasikara feno tsara tarehy fa izaho tsy manana indrisy), asiana menaka sahabo ho 1 litatra. Atao mamay tsara ny menaka vao arotsaka ny mofo novolavolaina ho boribory.
Marihina fa mitsingevana ho azy ny mofo ao anaty menaka rehefa mahazo ny hafanana mamay ilay menaka. Eny antsefatsefany ampanendasana eny dia mila alàna ambony afo ny saba raha mamay loatra ny menaka fa manjary may fotsiny ny ivelany ary tsy masaka ny anatiny.
Miparasadrasaka tsara no tokony endriky ny mofo baolina vita raha ity fomba arosoko ito no arahinao.
Dia mirary anao hazoto homana indray ary!
Ito ambany ito ny rohy raha te ahita ny horonantsary ianao :)
Publié par Ikala Fanja à 13:21 Aucun commentaire:
Publié par Ikala Fanja à 05:26 Aucun commentaire:
Vita izay ny fiantsenàna Soldes ho ahy manokana. Efa imbetsambetsaka niverimberina teny an-tsena ka afa-po amin'izay. Koa satria eto fizaràna ny soa sy ny tsara dia mba zaraiko aminareo izay hitako sy nahasarika ahy tamin'ny Dernières Demarques (ilay mora be indrindra). Araho an-tsary ary izay tao anaty harona e!
Eto ny ambony akanjo dia novidiko tao amin'ny Stradivarius 4€99, ny zipo tao amin'ny Camaieu 10€, ary ilay kapa kosa tao amin'ny André 22€.
Ny manaraka eto indray kapa novidiko tao amin'ny San Marina 34€, mahafinaritra loatra ahy izy io, vao tamin'ny pré-vente na ilay antsoina hoe varotra mialohan'ny fihenambidy ofisialy dia efa nanintona mafy ny masoko izy io ary tena nandrian'ny foko mafy dia mafy, saingy -20% monja izy tamin'izany ka mba nihaotra ihany aloha, efa ilay antsoina oe dernière démarque aho vao niverina indray ka mbola niandry ahy teo ilay anjarako, io mihitsy no farany teo, nitokana kely tery amin'ny dernières pointures. Dia azoko ihany e!
Ny akanjo Stradivarius 7€99.
Ireto farany ireto tena manan-danja indrindra fa tena sady tiako loatra (amin'ny faran-tampom-pitiavako mihitsy) no faran'izay mora:
1-Kiraro Clarks (eny, tena tara loatra amin'ny kiraro ao aho.. Maro be ny tiako tao saingy indrisy..) 44€
2- pataloha Bershka 7€99
3- ambonin'akanjo Stradivarius 4€99
4- palitao Stradivarius 9€99
Dia izay ny tsena vita... Amin'ny Janoary indray mifankahita ;)
Publié par Ikala Fanja à 15:28 12 commentaires:
Publié par Ikala Fanja à 13:19 2 commentaires: